Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule ndandithetha ngazo iinguqulelo zemfundo ze-AutoDeskKule meko siza kubona iinguqulelo zetyala, ezinokukhutshelwa kwiinjongo zetyala. Zonke ezi zinokusebenza kweenguqulelo zentengiso, kodwa zinokusetyenziselwa kuphela iintsuku ezingama-30 ukusukela kumhla wokufakwa.
Ngokwiphepha le-AutoDesk, lisebenza kuphela kubasebenzisi abahlala eMelika, Canada naseSpain. Kodwa ngokwenza oko kunokwenzeka ukuba ukwenze nakweliphi na ilizwe, ubuncinci apha ndikuxelela indlela endenze ngayo:
1. Yintoni enokukhutshelwa
Kwimeko yeSpanish ungayilanda kusuka apha
I-Autodesk Inventor 2010
I-Autodesk Revit Architecture 2010
2 Yintoni ebuyisela i-AutoCAD 2010
Kwiphepha lokukhupha kukho izixhumanisi ezongezelelweyo kwiimbuzo ezifunwa rhoqo kunye ncwadana enokukwazi ngayo ukuphucula kwenguqulelo.
Kwaye akunakwenzakalisa ukubhalisa kwi-podcast, okuza kuthiwa ngo-Agasti 27 iya kufundiswa nguLynn Allen.
3. Indlela yokukhuphela
Ndasebenzisa idilesi yebhokisi yeposi yase-United States, kulo mzekelo, ukudlulisa icebo, usebenzisa iibhokisi zeMeyili enekheli elilandelayo:
DORAL, FL. I-331 × 2
Ngokukhawuleza ndenze ukuba ndikhuphele ukhetho. Ngamanye amaxesha ayivumeli kuba inxulumana nomnikezeli weenkonzo ze-Intanethi kwaye ikubhaqe ukuba ukwelinye ilizwe, kodwa ndicinga ukuba ngenxa yokuba umboneleli wam eyilungelo lokuthengisa ilungelo laseNyakatho Melika akubangakho ngxaki.
Kwiintsuku ezimbalwa baya kuyithumela ngokuqinisekileyo iCD yoqobo kunye netyala layo, eliza kufika kwilokhari eFlorida (nantsi indlela eyayinjalo kunyaka ophelileyo nge-AutoCAD 2009). Emva koko kuya kufuneka ndibhatale kuphela iindleko zokuhambisa ezinokuba zi- $ 10, umcimbi unokuxoxisana nomnikezeli wasekhaya wezi nkonzo okanye umhlobo onenye yezi bhokisi.
4 Ikhutshulwa ixesha elingakanani?
Oko kuxhomekeke ekuxhumeni, kulungele ukusebenzisa inkqubo eququzelela ulawulo lokukhutshwa, kuba iifayile zinkulu kwaye ukuba unqanda ukukhuphela kufuneka urejistare kwakhona:
Ukukunika ingcamango, i-AutoCAD Civil 3D ilinganisa i-4 GB inxalenye yokuqala kunye ne-330 MB yesibini.
Ingakwazi ukuthatha kalula usuku lonke ngoxhumano oluqhelekileyo.
Emva kokukhutshelwa, kufuneka usebenze i fayili kunye nokongeza .exe
Ndiya kugxininisa, ezi ziinguqu zeentsuku ze-30, ukuzithenga kukho abahambisa kwilizwe ngalinye, nantsi uluhlu lwamanani malunga. Kuyenzeka ukuba usebenzise iinguqulelo zemfundo ezikhulu ngakumbi.
Iibhaso eziphefumlelweyo kunye ne-Symposium
Hector Chacon uthi: